China SPC Ft SM-056 Nrụpụta na Factory | N'akụkụ
Họrọ ala, attentionaa ntị na isi ise ise 1, lee ala akụrụngwa. N'ozuzu, e nwere osisi osisi siri ike, ụlọ osisi siri ike na ime ụlọ dị ike. Nhọrọ nke ala na-adabere na ihe akụrụngwa bụ, ụdị osisi na nnukwu gluu ka eji.
2. Lee anya na ala akwụkwọ na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa asambodo. Cheta ihu akwụkwọ asambodo ahụ, ala ahụ ga-enwerịrị opekata mpe nke ọkwa E1 nke mba, gbalịa ịhọrọ nke ọma karịa ọkwa mba nke ọkọlọtọ E0, ma ọ bụ asambodo ogo ngwaahịa ụmụaka.
3. Lee na teknụzụ mmepụta. Ezi mmepụta teknụzụ nwere ike hụ na ọ dị mma. Ka ihe atụ, siri ike flooring, mejupụtara siri ike osisi flooring na mesikwuru flooring nke eke flooring niile ịmụta technology nke "efu aldehyde nwere ọgụgụ isi n'ichepụta". Akụrụngwa bụ efu aldehyde, usoro dum nke mmepụta na imepụta ya bụ enweghị aldehyde mmetọ gburugburu ebe obibi, nke bụ nchekwa gburugburu ebe obibi.
4. Lee ụkpụrụ nke ala. Dabere na ụdị ịchọ mma mma, dịka ọmụmaatụ, ụdị Nordic nwere ike iji ala agba agba.
5. Lee anya na nkọwapụta ala. Dị ka usoro mado ịhọrọ ala nkọwa, dị ka herringbone collage obere 780 × otu narị na iri abụọ × 11mm
Nke gara aga: SPC Ft SM-055
Osote: SPC Ft SM-057